Laftagareen oo lagu eedeeyay lunsashada hanti dad-weyne | KEYDMEDIA ENGLISH
Laftagareen oo lagu eedeeyay lunsashada hanti dad-weyne
Laftagareen, oo hadda hoggaanka u haya shacabka Bay, Bakool iyo Shabeellaha hoose, [KGS], ayaa lagu eedeeyay boob xoolo dad-weyne, xilli, shacabka uu madaxda u yahay la daalaa dhacayaan abaar daran.
BAYDHABO, Soomaaliya – Madaxweynaha Dowlad gobolleedka Koofur galbeed, Cabdicasiis Laftagareen, ayaa saacadihii la soo dhaafay si weyn loogu dhaleeceeyay baraha bulshada, kadib markii uu soo baxay war sheegaya in malaayiin dollar oo uu ka dhacay shacabka uu xukumo ay u taallo Ziraat Bank, oo ku yaalla dalka Turkiga.
Lacagtaan oo tiradeedu gaareyso in ka badan $12 Milyan, ayaa inteeda badan lagu sheegay, dhaqaale loogu tala galay in lagu garab istaago dadka ay abaaruhu saameeyeen, ee ku rafaadsan degaannada maamulka Koonfur Galbeed, kuwaas oo sidoo kale cunaqabateyn adag kala kulmaya Al-Shabaab.
Bay, Bakool iyo Shabeellaha hoose, waxa ay kaalmaha hore, kaga kiraan gobollada ugu amniga daran dalka, waxayna si daran ugu nugul yihiin duruufaha Isbaddelka Cimillada, ee abaaruhu ugu horreeyaan, hayeeshee, Cabdicasiis Laftagareen, wuxuu kaliya diirrada saarayaa boob iyo maal aruursi.
Laftagareen, wuxuu ku fadhiyaa kursi dhiig leh oo Farmaajo ku fariisiyay, wuxuuna ku yimid doorasho boob ah iyo caaradda qorayga ciidanka Itoobiya, u-jeedkiisa ugu weyn, waa inuu hanti xoogggan tabcado inta uu joogo xilka ugu sarreeya KG, isla-markaana uu Kooxda waqtigu ka dhamaaday ka shaqeeyo soo laabashadooda.
Musuqmaasuqa iyo lunsiga hantida dad-weynaha, waa mid ay caan ku yihiin, hoggaanka siyaasadda Soomaaliya, waxaana la rumeysan yahay in madaxda maamulladu, lacag xooggan ka sameeyeen doorashooyinka dadban, kuwaas oo inta badan kuraasta labada Gole, u boobay shaqsiyaad gaar ah.
Qaar ka mida ah, Bangiyada Turkiga ayaa siyaasiyiinta Soomaaliya u noqoday, goobo ay hantida ay dalka ka dhaceen ku qarsadaan, wuxuuna hadda dalkaas fariisin nasiino u yahay Madaxweynayaaha, Koofur galbeed, Galmudug iyo Hirshabeelle, kuwaas oo Kooxda Farmaao u boobeen kuraasta ay ku fadhiyaan.